Ongabuka i-Netflix kule ngxenye yesibili yemvula kaNovemba | Izindaba zamagajethi
Ongabuka ku-Netflix kule ngxenye yesibili kaNovemba
INetflix ingumlingani ofanele wezimpelasonto ezinjengalesi, lapho imvula iyayamukela futhi isivalelise ngayo, futhi ukuthi engxenyeni enkulu yeNhlonhlo yase-Iberia ayikaze iyeke ukuna kusukela izolo, futhi lokho kuyizaba ezizwakalayo zabafundi bethu abathandekayo yehla ukuthola eminye imininingwane nokuzijabulisa. Sikunika yona, Sizoncoma okuqukethwe okuhle kakhulu ongakubona phakathi nengxenye yesibili kaNovemba Ngakho-ke ungaphonsa ingubo ejiyile endlini bese usebenzisa ithuba lokuzibeka ugcwele ukudla okulula.
Ufunani?, Ukuthusa, isenzo noma amahlaya? Sikulethela okuncane konke kuleli qoqo lokuqukethwe ngeSonto elinemvula kakhulu kuze kube manje kulo nyaka, ngakho-ke ungacwayizi, uyaphuthelwa.
1 Anabelle - Ukwesaba
2 Ithiyori Yakho Konke - Inoveli Yomuntu
3 Izikhumbuzo ze-International Assassin - Amahlaya
4 Amantombazane Amahle - IDrama
Anabelle - Ukwesaba
Yeka unodoli onelukuluku lokufuna ukwazi, nokunye okuningi, okuzokwenza uthuthumela ngokwesaba okuvela esandleni sika-ED noLorraine Warren, uma bezwakala njengawe, kungenxa yokuthile, bangabaphikisi bendaba abasuselwa ezenzakalweni zangempela esingazibona phakathi IWarren iyasiza. Ngakho-ke uma ufuna ukwesaba kancane, Anabelle yi-movie ephelele
Ithiyori Yakho Konke - Inoveli Yomuntu
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngesazi sezinkanyezi uStephen Hawking, owaziwa iminyaka eminingi njengomuntu ohlakaniphe kakhulu kule planethi, ungaphuthelwa Umbono Wakho KonkeUzofunda ukuthi wabhekana kanjani nokugula kwakhe okunzima nokuthi kwabuthinta kanjani ubuhlobo bakhe. Umlingisi U-Eddie Redmayne uwine i-Oscar ngokulingisa.
Izikhumbuzo ze-International Assassin - Amahlaya
Ukuhleka nge-meatloaf uKevin James, odlala umbhali wezinganekwane zesayensi ogcina ecwile endabeni eyiqiniso ngombulali wamazwe omhlaba, ngenxa yokushicilela inoveli yakhe kube sengathi yindaba eyiqiniso. Ingenye yamafilimu akhiqizwe yiNetflix, ebibambe iqhaza elikhulu ekukhiqizeni okuqukethwe kamuva nje.
Amantombazane Amahle - IDrama
Okuphelezelwa Uma Thurman, Natalie Portman noma Mira Sorvino kule ndaba emangazayo yokuthi saqala kanjani ukusuka ekubeni bancane saba ngabantu abadala. Isikhathi sokuthobela imithwalo yemfanelo futhi sihlale phansi notshwala ukuze sinqume ukuthi ngabe sikwazile ukufeza amaphupho ethu noma cha.
Ngaphezu kwalokho, uzothola Memezela 2 no UJackie Brown kubalingisi bama-movie we-Netflix.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ongabuka ku-Netflix kule ngxenye yesibili kaNovemba
UMeizu wethula ifoni entsha ye-Helio chip ngoNovemba 30
Ividiyo ekhombisa yenguqulo entsha yokushayela okuzimele kukaTesla